Kedu ihe Data Data na-emetụta SEO: Nghọta site na Ọcha
Maka azụmahịa azụmahịa ọ bụla, njikarịcha nyocha nke ọma na-abụkarị uruihe kpatara ya. Ọtụtụ atụmatụ SEO adịghị elekwasị anya na njirimara data data. Ha na-elekwasị anya n'ihe ndị dị ka ọchụchọ ọchụchọ,azụ njikọ, mgbasa ozi mgbasa ozi na ọnụahịa nke weebụsaịtị. Otú ọ dị, ụfọdụ ihe ndị ọzọ nwere ike ime ka ị nweta nsonaazụ SEO.
Jack Miller, Onye Ahịa Ahịa nke Ọkachamara Ọrụ Ntanetị kọwara otú data data si emetụta arụmọrụ gị - hosting gratuito con mysql.
Data data adịghị emetụta SEO ozugbo. Otú ọ dị, ihe ọ bụla nke na - emetụta njikọ njikọ,URL na ọdịnaya nwere ike iduzi ogo ogo ọchụchọ. Mgbe i juputara data gi, ozi dikammepụta ngwaahịa, otu, na ọdịnaya gosipụtara maka ngwaahịa ọ bụla ị na-agbakwunye n'ime usoro. Ngalaba ọ bụla nwere njikwa ọdịnayausoro nke na-ejikwa ozi a site na ịlele igbe dị na nchekwa data ya. Mpaghara niile na igbe ndị a nwere mmetụta dị irènke ngwaahịa ọ bụla na ozi ya.
Data Data na Njikọ Ntinye
SEO gụnyere akụkụ dịka njikarịcha nke utu aha, URLs na nkọwa.N'aka nke ọzọ, data data na-emetụta ụzọ ozi na-egosi na nchekwa data weebụ. Kedu otu ngwaahịa si ekewa, agbakọta, machibidona akara aha nwere mmetụta na njirimara ya na onye ọrụ. Nchịkọta a bụ otu n'ime ihe Google algorithm na-elekwasị anya mgbenyochaa usoro nlekọta ọdịnaya maka ogo.
Dịka ọmụmaatụ, ụzọ ntinye nke otu ụdị nwere ike ịbụ - Ebumnuche> uwe elu> Ekike ndị ikom>ọkara olu. Na saịtị a, ị nwere ike ịzụta uwe elu n'olu niile nke na-esite n'ikike ndị uwe elu nakwa dịka uwe ndị uwe ojii. Lee, zuruUwe olu na-esi n'úkwù ndị uwe elu kamakwa nke ọkara n'olu. Aha aha ahụ bụ H2 isi na njirimara nkọwana meta nkọwa.
Ụdị Mpempe akwụkwọ
Ihe ndekota di iche iche na-eme mgbe igwe nyocha choro otutu URLs dika otupeeji nke. Dịka ọmụmaatụ, enwere ike ijikwa njikọ abụọ ejiri jiri akara mkpado. Nchịkọta ọdịnaya nwere ike imebi gị SEO. Ọ na-ebelataikike nke ibe ebe ọ bụ na ọnụọgụ azụ na-esonye site na ọtụtụ URL na-eme ka ọ sie ike ịkwado.
Otú ọ dị, idezi ihe odide abụọ dịtụ mfe. Onye achọrọ ịchọta ihe niileURL ndị na-ezo aka na ngwaahịa ndị yiri ya. Izighari njikọ na peeji nke ịchọrọ nwere ike inyere gị aka weghachite ikike yaotu weebụsaịtị. Dịka ọmụmaatụ, ịmegharị koodu ma ọ bụ itinye 301 redirect codes nwere ike idozi nke a ma weghachite ụzọ saịtị saịtị 'ọkwa.
SEO dị mkpa maka azụmahịa ọ bụla n'ịntanetị ozugbo ọ na-eme ka ọnụnọ dị n'ịntanetị dị ike.Ọtụtụ ihe nwere ike imetụta arụmọrụ nke ebe nrụọrụ weebụ na-emetụta ihe dị iche iche. N'ime ihe ndị a bụ data data. N'ọtụtụikpe ahịa, ndị ahịa ahịa dijitalụ aghọtaghị mkpa ọ dị na SEO ma mesịa kwụsị ileghara ya anya. Otú ọ dị, dịka a hụrụ n'elu, ihe ọ bụla metụtara URLsna ọdịnaya dị mkpa nwere mmetụta na otu Google ga - esi debe saịtị. Iji ihe omuma a di n'elu, mmadu puru igosi ihe ndi choroemetụta ụzọ otu ebe nrụọrụ weebụ si arụ ọrụ banyere ozi ngwaahịa. O nwekwara ike idozi ụfọdụ n'ime ihe ndị mejọrọ nkịtị dị ka efuedemede ma ọ bụ ozi ngwaahịa.